မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ပြသမည့် ဇာတ်ကားများ | MyStyle Myanmar
မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ တစ်ပတ်အတွင်း ရုံတင်ပြသမည့် ဇာတ်ကားများ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရဲ့ အပိုအလိုမရှိတဲ့သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေကို ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း မြင်တွေ့ရဦးမှာပါ။ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) ရိုက်ကူးပြီး ရန်အောင်၊ ပြေတီဦး၊ မင်းဦးနဲ့အခြားအနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမအချစ်ဆုံး ယောကျာ်းသုံးယောက်က ဘယ်သူလဲ၊ ဘာ့ကြောင့် ချစ်ရတာလဲဆိုတာကို ပိတ်ကားထက်မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုရင်း အဖြေရှာလိုက်ရအောင်။
Junction City, Junction Square, City Mall (St.John). Junction Mawtin
Guddu ဆိုတဲ့ သတင်းထောက်ကောင်လေးက ခေါင်းမာပြီး တဇွတ်ထိုးနိုင်တဲ့ Rashmi ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Guddu က သူ့ကောင်မလေးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးက လက်ထပ်ခွင့်ကို ငြင်းလိုက်တာလည်းမဟုတ်သလို၊ လက်ခံလိုက်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ မိဘဆွေမျိုးကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်ပြီလို့ပဲထင်နေကြတာပါ။ ခေတ်ဆန်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ ရှေးရိုးစွဲမိဘတွေကြား ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကို ဟာသအဖြစ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Junction City, City Mall (St.John)
လွင်မိုး၊ နေတိုးနဲ့ သက်မွန်မြင့်တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အခြားအနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဟာသဇာတ်မြူးကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာတော့ ကိုကိုနေတိုးကို ခပ်ချောချော မမနေတိုးအဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဘယ်လိုတွေတောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ရယ်ရမလဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ တာတူးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အပြေးအလွှားသွားကြည့်လိုက်ရအောင်။
Thamada Cinema, Thwin Cinema, Mingalar (Thein Gyi Zay), Shae Saung Cinema, Mingalar Dagon Centre (II), Mingalar Sanpya, Mingalar Gamone Pwint (Hledan-San Yeik Nyein), Mingalar Waziyar, Top Royal (Parami-Sein Gay Har), Mingalar Sein Gay Har (Hlaing Thar Yar), Mingalar North Okkalapa, Mingalar Tamwe (Bayint Naung)
ကမ္ဘာကြီးက ဂြိုလ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါ လူစွမ်းကောင်းမလေး Captain Marvel တစ်ယောက် စကြဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့ စွမ်းအားအရှိဆုံးသူရဲကောင်းမလေးဖြစ်လာပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားကြရဲ့လား။ ဒါဆိုရင်တော့ Captain Marvel (3D) ဇာတ်ကားကြီးကို ရုပ်ရှင်ရုံက ဇိမ်ကျကျ သွားကြည့်လိုက်ရအောင်။
Junction City, Junction Square, City Mall (St.John), Juction Mawtin, Nay Pyi Taw Cinema, Mingalar Sanpya, Mingalar Gamone Pwint (Hledan-San Yeik Nyein), Mingalar Tamwe (Bayint Naung)
“ဝါဝါထိန်ထိန် သီတာလေးတို့ အိမ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကြားရင် ကျောမချမ်းသွားကြဘူးလား။ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရော တစ်ခေါက်တည်းကြည့်ရတာ အားမရသေးလို့ ထပ်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် “လိပ်ပြာစံအိမ်” ဇာတ်ကားကြီးက ရုံတင်နေသေးတယ်နော်။
ရယ်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ထိုင်းဟာသကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းလူငယ်လေးတစ်စုက လန်ဒန်မြို့မှာ သွားရောက်နေထိုင်နေကြပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စကား ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာက ဘာသာစကားနဲ့ နားလည်စရာမလိုဘဲ နှလုံးသားနဲ့နားလည်ရမယ့်အရာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ အချစ်ဟာသကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
London Sweetie Official Trailer
အချစ်မှာ ဘာသာစကားမလိုဘူး ဆိုတာယုံလား ????—–Trailer လေး အရင်ကြည့်ကြည့်လိုက် !!!!မင်မင်တော့ ရုံတင်ရက်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ချင်နေပါပြီနော်
Posted by JCGV on Thursday, January 31, 2019
လှတောသား စကားကြွယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လှတောသားတွေက စကားအရာမှာ လိမ္မာပါးနပ်မှုရှိပြီး ဟာသမြောက်အောင် ပြောတတ်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးနားဝရှိကြမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း လှတောသားတစ်ယောက် သူ့ယောက္ခမလောင်းနဲ့ အပြိုင် ဘယ်လိုဟာသမြောက်အောင် ပြောထားမလဲဆိုတာ တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mingalar Sanpya, Mingalar Gamone Pwint, Mingalar Sein Gay Har (Hlaing Thar Yar), Mingalar North Okkalapa, Mingalar Tamwe (Bayint Naung)
ဒါရိုက်တာ သြရသရိုက်ကူးပြီး လူမင်း၊ ထွန်းထွန်း၊ ခင်လှိုင်၊ အိချောပို၊ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း၊ မေပန်းချီနဲ့ အခြားဟာသ သရုပ်ဆောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗျစ်ရည်ဆိုင်စောင့်တဲ့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရုံတင်နေပြီနော်။ တဝါးဝါး တဟားဟားနဲ့ ရယ်ရလို့ ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်သွားမယ့် ရုပ်ရှင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mingalar Sanpya, Mingalar Gamone Pwint (Hledan-San Yeik Nyein), Mingalar Sein Gay Har (Hlaing Thar Yar), Mingalar North Okkalapa, Mingalar Tamwe (Bayint Naung)
ကိုယ်ကြိတ်ခရက်ရ်ှနေတဲ့ ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းဇုန်ထဲမှာပဲ ထည့်ထားတာလောက် ကြေကွဲစရာကောင်းတာမရှိပါဘူး။ စာဖတ်သူတို့ရော ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းဇုန်ထဲမှာပဲထည့်ထားခံနေရတာလား။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ပတ်ရုံတင်ထားတဲ့ ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားကို သွားကြည့်လိုက်ကြဦးနော်။ ဘယ်လိုတောင် အားမလိုအားမရဖြစ်စရာကောင်းသလဲ အသည်းယားစရာကောင်းလဲဆိုတာ ပိတ်ကားထက်မှာ တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Nay Pyi Taw Cinema, Mingalar Sanpya, Mingalar Gamone Pwint (Hledan-San Yeik Nyein), Mingalar Tamwe (Bayint Naung)
MyStyle Myanmar2019-03-14T17:28:08+06:30March 14th, 2019|Cinema, Lifestyle|